Waa maxay xumeynta ilmaha? | khayraadka USAHello loogu talagalay waalidiinta | USAHello
In USA waxaa ka jira sharciyo ilaalinta carruurta si ay u joojiyaan dadka waxyeelo carruurta. Baro xumeynta ilmaha, ilaalinta carruurta, iyo waalidka waa in ay raacaan xeerarka.
Xumeyn ilmo waxay ka dhigan tahay wax kasta oo carruurta. Haddii qof xadgudubyada carruurtooda, Sharciyada ilaalinta carruurta ee USA u yidhaahdaan, xukuumaddu waa la kaxaysan carruurta.
Xadgudubyada caruurta waxaa ka mid ah waxyeelo carruurta iyo isagoo calool adag iyaga. Waxa kale oo ay dhigan tahay in aan si wanaagsan u daryeesho oo iyaga ka mid. Xadgudubyada caruurta waxaa ka mid ah falalka galmada la caruurta.
Waa kuwan waxyaabaha qaar ka mid ah in sharciga uu leeyahay looma oggola:
Ha oo keliya carruurta ka tago, haddii ay da'doodu ka yar tahay waa 12 sano jir ah
Waa inaadan ka dhacay, Tuur, ama rux carruurta
Ha taaban ama waxyeelayn taranka carruurta (qaybaha galmada)
Waa in aanad gelin ilmahaaga khatar
Waa kuwan waxyaabaha qaar ka mid ah sharciga wuxuu leeyahay waa in aad samayn:
Isticmaalka suunka carruurta oo dhan iyo kuraasta caruurta ee gaariga ee caruurta yaryar
carruurtaada dugsiga dir
Bar ilmahaaga in ay ka gudbaan waddada si nabad ah
Tus carruurtaada sida nadiif ah oo caafimaad qaba in uu sii joogo
Samee ilmahaagu xidho koofiyada baaskiilka (sharciga ah ee dalalka qaar ka mid ah)
Waxaa jira wasaaradaha dawlada mas'uul ka ah ilaalinta caruurta. Waxay waxaa loo yeedhi karaa Adeegyada Badbaadinta Ilmaha ama Adeegyada Qoyska, ama Adeegyada Carruurta.
Haddii qof ayaa aaminsan in aad ku aflagaadeeyay ilmo, waxay wici kartaa Adeegyada Ilmaha iyo in aad soo sheegtaa. Dhakhaatiirta iyo macalimiinta waa in ay soo sheegaan waalidiinta haddii ay ka shakiyaan xadgudub.
Maxaa dhacaya haddii aan sheegay for xadgudubka ilmaha?
Saraakiisha Adeegyada Carruurta baadhista bilaabi doona. Haddii ay aadan u malayn in ay jirto khatar degdeg ah, Adeegyada Ilmaha wuxuu kuu sheegi doonaa waxa badala waa inaad. Waxaad heli doontaa shaqaale bulsho. shaqaalaha bulshada ee kaa caawin doontaa in aad isbedel ku sameeyo. Waxaad heli kartaa:
Adeegyada caafimaadka la xiriira, sida daaweynta daaweynta ku xadgudubka mukhaadaraadka (dhibaatooyin la xiriira daroogada iyo khamriga)
Ku caawi caruurtaada, sida umeerin, tababarida ama la talinta
Caawimada guryaha iyo faa'iidooyinka kale
Maxaa dhacaya haddii ilmahaygu waa laga qaadaa?
Haddii Services Child maleeyo ilmahaaga waa khatar, waxay qaadan doontaa ilmahaaga iska. Waxay dacwaddaada si maxkamad sharci gudbin doonaa.
Caruurta laga qaaday waalidkood tag guri foster. Tani waa guri ku meel gaar ah leh xubnaha kale ee qoyska ama shisheeyayaasha. Waxaad u baahan doontaa si ay u muujiyaan in aad noqon kartaa waalid wanaagsan oo aad gurigaaga amaan ka hor inta carruur aad guriga ku soo noqon karaan.
Ma waxaad tahay ilmo la xumeynayo? Ama ilmo aad ogtahay ma u baahan tahay caawimo? Call 800-422-4453
The Hotline Faraxumaynta Ilmaha National furan yahay 24 saacadood maalintii, 7 maalmood toddobaadkii. taliyayaasha Hotline leeyihiin turjubaano ku hadla in ka badan 200 luqadaha si ay u caawiyaan carruurta. taliyayaasha hotline ma garanayaa kii aad tahay, oo uma baahnid inaad u sheegto. Laakiin waxay kaa caawin doona inaad go'aansato waxa la sameeyo. Call 1-800-422-4453 - ka dibna ku hardiyi 1 inaad la hadasho la-taliyaha khadka a.
Barbaarinta carruurta iyo waalidnimada ee dalka Mareykanka
daryeelka caruurta caqliga iyo maxkamadaha: hage loogu talagalay waalidiinta